150 Xubin oo katirsan Qoyska Aala-Sucuud Oo uu ku dhacay Coronavirus. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
150 Xubin oo katirsan Qoyska Aala-Sucuud Oo uu ku dhacay Coronavirus.
On Apr 9, 2020 277 0
Tobanaan kamid ah qoyska Aala-Sucuud ayaa waxaa ku dhacay Caronavirus, iyadoona uu is karantiiley boqor Salmaan bin Cabdil Caziiz.
Warbixin uu baahiyay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheega in tobanana ruux oo kamid ah qoyska maamulka Aala-Sucuud uu ku dhacay cudurka Coronavirus, islamarkaana madaxdii ugu sarreysay ay billaabeen iney is karantiilaan.
Xubnaha uu cudurku ku dhacay waxay tiradoodu gaareysaa 150 ruux, waxaana ku jira xubno muhiim ah inkastoo aan magacooda iyo jagooyinkooda la wada sheegin.
Dadka uu cudurka soo ritay waxaa ku jira amiirka magaalada Riyaad Feysal bin Bandar, kaas oo la dhigay qeybta deg dega ah ee caafimaadka, taasi oo muujineysa in xaaladiisu ay halis tahay.
Boqorka waayeelka ah ee Aala-Sucuud Salmaan bin Cabdil Caziiz ayaa isagana wuxuu isku karantiiley jaziirad ku taalla badda dhexdeeda, waxaana wiilkiisa Muxamad bin Salmaan iyo masuuliyiin kalena ay iyaguna isku karantiileen goob saxaro ah oo u dhow magaalada Jedddah.
Isbitaalka weyn ee boqor Feysal ayaa dhakhaatiirta ka howlgasha waxaa lagu wargeliyay iney diyaar garow kama dambeys ah galaan, islamarkaana fishaan in shakhsiyaad waaweyn oo katirsan maamulka Aala-Sucuud isbitaalka lasoo seexiyo.
Waxaa sidoo kale la amray in isbitaalka laga saaro dadka xanuunsan ee aan ka tirsaneyn qoyska, si ay u suuragasho in la qariyo dadka uu soo ridanayo xanuunka ee katirsan Aala-Sucuud.
Axmad 3762 posts 8 comments
Khasaare Culus Oo ka dhashey Camaliyad Nafhurnimo Oo ka dhacday Afaafka…
Afaafka hore ee laga galo xarunta madaxtooyada ee uu deganyahay madaxweynaha Dowladda federaalka ayaa waxaa ka…
Maxaa Isku Dhufeys geliyay Qaar kamid ah Culimada iyo Hay’adaha…